Waa maxay qiimaha guud ee beddelka cadaadiska? Changzhou soo saarayaasha cadaadiska cadaadiska si ay kaaga caawiyaan inaad si buuxda u fahamto!
Waxaa jira waxyaabo badan oo nolosheena ah oo u baahan cabbiraadda cadaadiska, sida kiimikada, farsamada, aaladda korontada iyo biyaha loo isticmaalo ee u baahan kormeerka waqtiga dhabta ah ee cadaadiskooda, laakiin marka qiimaha cadaadisku uu aad u sareeyo qalabka cabbiraadda d ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya dhalada dhalada ah ee aluminiumka aluminiumka ah iyo aluminiumka wax lagu duubay?
A. Waa maxay farqiga u dhexeeya dhalada dhalada ah ee aluminiumka aluminiumka ah iyo aluminiumka wax lagu dhejiyo? Glass fiber aluminium bireed cajalad cajalad, iyadoo la isticmaalayo habka isku dhafan u gaar ah horumarsan, ka ...
Cajaladda foornada aluminium - cajaladda sixirka ee "duuli kara" cirka
Rakaab ajnabi ah ayaa naxay markii uu ogaaday in shaqaalaha dayactirka garoonka ay duubeen mashiinka ka hor inta aysan diyaaradda duulin. Muuqaalka ayaa la duubay oo lagu dhajiyay internetka, taasoo kicisay walaac iyo su'aalo ku saabsan saameynta nabadgelyo ee isticmaalka cajalad lagu dayactirayo airfram ...
Egret MOPP Cajalad.
Cajaladda 'Egret', oo la aasaasay sanadkii 1997-kii magaalada Changzhou, ee gobolka Jiangsu, waxay ku fadhidaa dhul dhan 13,000 oo mitir oo isku xigxig ah, iyadoo wadar ahaan dhismeheedu yahay 20,000 mitir murabac. Alaabteenna ugu muhiimsan ee dhejiska ayaa loo qaybin karaa laba qaybood oo ballaadhan. Midka hore waa taxanaha cajaladda dhejiska ah: aluminiumka aluminium, PE ...
Doorka cajaladda isbuunyada EPDM ee badeecada isbuunyada u adkeysanaya kuleylka iyo farsamooyinka dalabka
Cinjirka Butyl wuxuu leeyahay soo saaris gaas aad u fiican iyo u adkeysi kuleyl, waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa soo saarista badeecooyin caag ah oo kuleylka u adkaysta, waxyaabaha caagga ah ee isbuunyada kuleylka u adkaysta waa mid ka mid ah. Qaar badan oo ka mid ah soo saarayaasha wax soo saarka tuubooyinka gudaha ayaa og inay butylku ku jiraan gudaha ...
Cajaladaha aluminium ee aluminium ee aadan waligaa isticmaalin
Markay tahay cajaladda aluminium aluminium, waxaan aaminsanahay inaynu dhammaanteen aqoon u leenahay, maadaama badanaa laga arki karo qaybta qalabka guryaha. Ugu horreyntii, cajaladda aluminium ee aluminiumku waxay ka samaysan tahay xabag cadaadis leh oo xasaasi ah, oo lagu daray sifooyinka aluminium aluminium sare ...
Waa maxay cajaladda xumbadu?
Cajaladaha xumbada waxaa loo isticmaalaa dhawaqa qoyaanka, dahaarka, gaaska, barkinta / suufka, iyo shaabadaynta waxaana loogu talagalay in lagu xoojiyo muuqaalka isla markaana loo wanaajiyo waxqabadka guud ee naqshadeynta alaabtaada. Cajalad kasta oo xumbo leh waxay leedahay astaamo u gaar ah iyo ujeeddooyin ku habboon. Qaar ka mid ah cajaladahaan ayaa lagu heli karaa noocyo kala duwan ...
Maxay yihiin adeegsiga cajaladda aluminium
Ugu horreyntii, cajaladda aluminiumku waxay ka samaysan tahay xabbad tayo sare leh oo xasaasi ah. Intaa waxaa sii dheer, aluminium-aluminiumku wuxuu leeyahay astaamaha u adkeysiga heerkulka sare iyo u-hawo hawo, sidaa darteed wuxuu leeyahay saameyn ku-ilaalin kuleyl wanaagsan iyo astaamo milicsiga leh, oo lagu dabaqi karo nolosheena ...